Apple Watch: fanadihadiana amin'ny paoma | Androidsis
Cristina Torres sary placeholder | | About us, hevitra, SmartWatch
Androany ny fampisehoana ny famantaranandro Apple. Raha ny zava-misy dia tara amin'ny paikady Android ny paoma, satria ny mpifaninana rehetra dia naneho ny filany tamin'io sehatra io, ary na dia ny iray aza no dinihina ao anatin'ny sehatra mora vidy dia nahazo ny loka ho an'ny endrika tsara indrindra tamin'ny MWC 2015 lasa teo, ny Motorola Moto 360 .Ny panorama toy izany dia tsy ampy fa ny Ny smartwatch an'ny orinasa dia misy iOS ao anatiny. Ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny rafitra miasa ihany no latsaka tamin'ny fotoana fohy nahatongavany. Ka dia hofakafakaintsika raha toa ka tsia ny fikafika teknikan'ny Apple Watch izay tonga sa tsia.
Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia hanangana andiana fampitahana amin'ireo izay mandraka ankehitriny isika mpanjaka amin'izao tontolo izao smartwatch, Fa amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ireo izay tsy dia mahalala loatra ny zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny Apple, dia hofariparitanay amin'ny antsipirihany ny toetra ara-teknikan'ny Apple Watch, ary koa ny zavatra azo atao miaraka aminy, ny vidiny ary ny daty fandefasana. Amin'izany rehetra izany dia ho voavaha ny fisalasalana rehetra mety nanananao momba ilay famantaranandro paoma. Te hahafantatra ny zava-drehetra momba ny Apple Watch ve ianao? Andao ary ho tonga eo!
1 Toetra ara-teknikan'ny Apple Watch
2 Ny Apple Watch sy ireo fiasa ao aminy
4 Ny vidin'ny Apple Watch sy ny daty famoahana
Toetra ara-teknikan'ny Apple Watch
Ny Apple Watch dia famantaranandro iray izay tonga hatramin'ny famaranana telo samy hafa izay samy hafa ny vidiny. Ny tsirairay amin'izy ireo dia afaka mitondra boaty roa samy hafa habe, ary miaraka amin'izay dia mamela andiana fitambarana amin'ny fanovana ny tadiny. Raha ny tena izy, ny fampisehoana androany dia tsy feno rakitra ara-teknika, zavatra tsy mahazatra amin'ny raharahan'i Apple. Raha ny tena izy, tsy fantatsika akory ny famahana ny efijery, ny hany nolazain'i Tim Cook taminay fa efijery Retina tsy misy maro hafa. Ny zava-dehibe dia nifantoka tamin'ny asan'ny famantaranandro, izay anomezantsika ny fizarana manaraka amin'ny lahatsoratray anio momba ny Apple Watch.
Ireo fitaovana nanamboarana ny Apple Watch dia miovaova arakaraka ny fanontana nofidiana. Araka izany, ny Apple WatchIzy io dia tonga amin'ny vata vy tsy misy fangarony sy kristaly safira; ny Apple Watch Sport, ny be toekarena indrindra, dia miloka amin'ny fitoeran-aliminioma ary vera Ion-X nohamafisina; ary ny Apple Watch Edition, ny lafo indrindra amin'ny rehetra, dia voarakitra ao anaty krystaly volamena sy safira 18 karat.
Ny teboka malemy indrindra dia toa ny bateria, satria mahatratra 18 ora amin'ny fampiasana antonony, ary mety ho kely amin'ny 6 amin'ny fampiasana mafy.
Ny Apple Watch sy ireo fiasa ao aminy
Inona no azontsika atao amin'ny Apple Watch io angamba no tena mahaliana ny mpampiasa. Na dia efa nasehon'i Apple taminay tamin'ny volana septambra aza ny kodiarana nifindranay sy nifandraisantsika tamin'ilay fitaovana, amin'ity tranga ity dia te handroso kely izy ireo. Raha ny marina, amin'ny famantaranandro Apple dia afaka mamaly mivantana ireo antso avy amin'ny smartwatch ianao. Ity dia zavatra mbola tsy voalaza teo aloha, fa efa hitantsika tamin'ny tranga Android tamin'ny tolo-kevitr'i Huawei.
Ny fampandrenesana mifandraika dia azo ampiasaina hifanaraka amin'ny mpampiasa, ary koa ny efijery haseho ny famantaranandro. Mety ho avy amin'ny famantaranandro tsotra analog, ho amin'ny famantaranandro nomerika miaraka amina sary mihetsika izay tiantsika indrindra. Ho fanampin'izay, amin'ity asa ity dia afaka manampy data izay heverintsika ho ilaina isika, toy ny fampahatsiahivana na kalandrie. Tsy azontsika atao ihany koa ny tsy mahita ilay fotoana hahatsiarovantsika fa Apple Pay koa dia hampidirina ao amin'ny Apple watch. Raha ny marina dia ho tena tsotra ny fampiasana azy. Ho ampy ny manatona ny fitaovana fandoavam-bola namboarina mba hitrangan'ny fifanakalozana. Mazava ho azy, tsy maintsy mifehy tena ianao raha toa ka mpanjifa, satria miaraka a fomba fandoavana mora tokoa, ho may ny kaonty.
Volavola tena azo namboarina
Endri-javatra tsy manam-paharoa toy ny mandoa amin'ny Apple Pay
Volavola mitovy amin'ny mpifaninana
Ny vidin'ny Apple Watch sy ny daty famoahana
El Vidin'ny Apple WatchAo amin'ny kinova farany ambany indrindra, izany hoe, ny Apple Watch Sport amin'ny tranga 38mm dia $ 349. Ireo vola ireo dia $ 399 raha mahazo ilay boaty lehibe kokoa isika. Ao amin'ny elanelam-potoana anelanelany dia manana ny Apple Watch nentim-paharazana isika izay ny vidiny dia hiovaova eo anelanelan'ny 549 sy 1049 dolara. Etsy ankilany, ny Apple Watch Edition manokana amin'ny volamena dia handoa $ 10.000.
El Apple Watch Hatao ho fampisehoana any amin'ny magazay amin'ny 10 aprily izy io, saingy tsy handeha eny an-tsena raha tsy amin'ny 24 aprily ary amin'izao fotoana izao dia tsy ao anatin'ny tsena hanolorana azy i Espana. Tsy maintsy miandry an'i Apple isika hanamafy ny datin'ireto firenena manaraka ireto izay hanehoana azy hahalala hoe rahoviana isika no hanana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Apple Watch: famakafakana ny famantaranandro
Tsy izaho no hiteny hoe tsy milay fa ratsy tarehy izy na zavatra toa izany, fa hiteny kosa aho fa valala tahaka ny tampon'ny hazo kesika
Eny, manana ny fampandrenesana eo am-pelatananao ianao, ary?… ..